Socdaalka Muse Bixi uu Djabouti ku tegey muxuu kaga geddisan yahay socdaalladii Siilaanyo, Rayaale iyo Cigaal? | Awdalpress.com
Socdaalka Muse Bixi uu Djabouti ku tegey muxuu kaga geddisan yahay socdaalladii Siilaanyo, Rayaale iyo Cigaal?
Waxa Daabacay staff-reporter on Jan 7th, 2018 and filed under Daily Somali News. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.
Awdalpress – Awdalpress – Somaliland maaha dawlad dunidu ictiraafsan tahay, waana dal aan maamulkiisu caddaalad ku dhisnayn, isla markaana ay qabyaalad, maamul xumo iyo musuq maasaq halakeeyey.
Dhawaan doorashadii la yidhi waxa helay Muse Bixi, 70% reer Somaliland kuma aanay farxin….kumana faraxsana, waxana loo arkay mid boob iyo musuq uu hadheeyey. Xisbiyadii mucaaridkiina waxa khasab ku noqotay in ay natiijadii jujuubka ahayd oggolaadaan.
Haddaba ninkan Muse Bixi ee aan madaxnimadiisa heshiiska lagu ahayn, reer Somalilandna intooda badani aanay oggolayn, ayaa maalintii shalay ahayd waxa uu socdaal ku tegey dalka Djabouti. Socdaalkaasi oo aan hore loo sii shaacin, ayaa wariyayaasha Muse Bixi ee caydiga ahi ku sheegeen in ay Djabouti casuuntay, laakiin dawladda Djabouti may sheegin in ay casuuntay Muse Bixi iyo in kale, soo dhaweyntiina waxa ay u dirtay wasiir ka tirsan xukuumadda Madaxweyne Ismail Omer.
Dhinaca kale Djabouti waa dawlad caalamka ka tirsan, oo aan la sinnayn Somaliland, waxana hoggaamiya madaxweyne waaya arag ah, oo dalkiisa dhisay. Beesha caalamkana kaga jira maqaam fiican, oo karaamo leh.
Madaxweyne Ismail Omer Geelle waxa uu jecel yahay midnimada iyo wada jirka Somaliyeed, waxana uu taageero weyn siiyaa dawladda Muqdisho, oo uu ka taageero dhinaca amniga, ciidammadiisuna waxa ay naftooda u hureen, oo dhiig badan u daadiyeen sidii ay u nabadayn lahaayeen Somaliya.
Muse Bixi xukuumaddiisa iyo kuwii ka horreeyey ee Somalilandna waxa ay og yihiin in uu Madaxweyne Isamail marna qarsan mabda’iisa Somalinimo iyo taageerada midnimada Somaliyeed. Sidaasi daraaddeed, waxa ay haddana jecel yihiin in ay xidhiidh la sameeyaan Djabouti, oo isku dhereriyaa sidii ay la mid yihiin.
Haddaba bal aan eegno fikir arrintan ku saabsan oo aan ka hellay barta facebook….
Id Hassan Musa
Djibouti madaxdeedu in ay madaxwayne Somaliland ah dalkooda ku soo dhaweeyaan imika uguma horayso ee bal aan ka yara faaloodo waxa ay ku kala duwanyiin safarkii ugu horeeyay ee madaxwayne Siilanyo Djibouti ku taggay August 2010kii iyo kan uu shalay madaxwayne Muuse dalkaa ku taggay.
Ugu horayn waxa aan dalwadaagtay xasuusinayaa in aanu jirin madaxwayne Somaliland ah oo Djibouti calankiisa u sudhay goobta uu fadhiistay amma gaadhiga lagu qaaday ba. Intay Somaliland jirtay dal qudha ayaa madaxwayne Somaliland ah, waa wakhtigii Siilanyo e, siiyay protocol dhamaystiran. Dalkaasina wuxu ahaa South Sudan oo markii madaxbanaanidooda u wanqalayeen madaxwayne Siilanyo usoo dhaweeyay tabtii ay madaxda dalalka kale ba usoo dhawaynayeen, calankeeniina sudhay madashii ay ka dhacday wanqashu.
Hadeen kusoo noqdo Djibouti, Ismaaciil Cumar Geele madaxwayne Siilanyo safarkiisii ugu horeeyay ee uu Djibouti ku taggo waxa uu ugu yimid diyaarada hoosteeda, shalay na isagoo airport ka jooga ayuu doorbiday in uu iska fadhiyo VIP lounge ka oo uu Muuse Biixi wasiirkiisa ariimaha dibada soo kaxee ku yidhahdo. Maxay ku kala duwanyihiin 2da madaxwayne iyo 2da marxaladood ba.
Ahmiyada kowaad ee Ismaaciil Cumar Geele waa in uu hantiyo maskaxda iyo quluubta madaxda Somaliland si uu danta dalkiisa uga fushado isla markaana dalabaad amma shuruudo adagi xageena uga taggin. Sababta uu Siilanyo diyaarada hoosteeda ugu taggay waxa ay tahay:
1. Siilanyo oo magaciisu waynaa isla markaana mucaaradad adag ku hayay madaxwaynihii uu ka badiyay ee Daahir Riyaale.
2. Ismaaciil Cumar Geele oo aan si fiican uga dharagsanayn aragtida siyaasadeed ee madaxwayne Siilanyo isla markaana ka werwer qabay in uu Cigaal 2aad ku noqdo.
3. Iyo madaxwayne Siilanyo iyo guud ahaan Kulmiye oo Ethiopia isku fiicnayn wakhtigii ay mucaaridka ahaayeen.
2010kii, Ismaaciil Cumar Geele isagoo dhinac na ka werwersanaa waxa madaxwayne Siilanyo kaga soo bixi doona ayuu dhinaca kale na u arkayay fursad qaaliya oo uu Somaliland ku hantiyi karo isla markaana kusoo afjari karo xidhiidhkii xulafaysnaa ee ka dhaxeeyay Somaliland iyo Ethiopia. Werwerka ugu wayn (nightmare) ee Ismaaciil Cumar Geele waa Somaliland iyo Ethiopia oo u heshiiya oo wuxu xasuustaa markii Meles Zenawi iyo Cigaal u heshiiyeen dawladii Somalia ee uu Carta ku dhisay 2000.
Inkastoo Daahir Riyaale, geeridii Cigaal dabadeed, xidhiidh la sameeyay Djibouti hadana muu ka leexan seeskii diblomaasiyadeed ee uu Cigaal dhisay ee xulafaysiga Ethiopia iyo Somaliland. Sidaa daraadeed Ismaaciil wuxu salaxanayay in uu cadkiisa kulaylka kaga goosto aragtidii Kulmiye ee ka fogayd mid qaranimo ee ku salaysnayd ciddii Daahir Riyaale la shaqaysay ba waa cadawgayaga oo wuxu ku guulaystay in uu ka takhaluuso xidhiidhkii adkaa ee Ethiopia iyo Somaliland. Hadalkii uu ka yidhi madaxwayne Siilanyo August 2010kii kulankii ay kula yeesheen Ismaaciil Cumar Geele qasriga madaxtooyada ee dalkaasi waxa uu ahaa:”adigaa noogu dhaw ee gacan naga sii aqoonsiga raadistiisa”. Dhawr todobaad dabadeedna waakii lahaa Ismaaciil “buudhigii bay ka horaysiiyeen faraskii”.
Soo dhawaynta Muuse waxa ay la xidhiidhaa uun siyaasadaa aan kor kusoo sharaxay ee laakiin waxa ay ku kala duwanyiin uun tii Siilanyo, waa isagoo imika Muuse yaqaana kuna kalsoon waxa uu ka filan karo oo aan yacni ka baqayn in uu Cigaal oo kale ku noqdo. In aad xasuusataan mooye Muuse Biixi wuxu la socday waftigii madaxwayne Siilanyo ee ka qayb gallay caaleema saarkii Ismaaciil 2016kii. Madaxwayne Siilanyo waakii la ag-fadhiisiyay madaxda maamul goboleedyada somalia iyo madax dhaqameed markaa Muuse waa nin uu hore usoo tijaabiyay oo kolay airport kaba caga jiid ayuu ku yimid.
Lax walba halka ay is-dhigto ayaa lagu qalaa ee ilaahay madaxdeena haka yeelo kuwo fahamsan siyaasadaha qaran lagu hogaamiyo, kalsoonidana gadhka ha u joojiyo, aamiin.
This post has been viewed 5820 times.